पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र २१ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ६ तारिख) आइतबार : ॐ सूर्य देवाय नमः - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र २१ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ६...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र २१ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ६ तारिख) आइतबार : ॐ सूर्य देवाय नमः
२१ भाद्र २०७७, आईतवार ०९:४३
कोभिड–१९ महामारी बन्दाबन्दी खुल्ला भएपछि अझ भयावह हुँदै गईरहेको अवस्थालाई बुझेर सबैजना सामाजिक दुरी कायम गर्दै घरमै बसौं । अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर नजाऔं ।
कोभिड–१९ को संक्रमणबाट २ सय ८० जनाको निधन भईसकेको अवस्था छ भने संक्रमितको संख्या ४५ हजार २ सय ७७ जना पुगिसकेको छ । करिब करिब देशैभर कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ । यद्यपि २७ हजार १ सय २७ जना सफल उपचारपछि घर फर्केका छन् ।
मेष – दिन शुभ र भाग्योदयकारी सिद्ध होला । आरोग्यता र प्रशन्नता बढ्नेछ । सुख शान्तिमा वृद्धि हुनेछ । वार्तामा सफलता प्राप्त होला । विलासमा पनि आकर्षण बढ्ला । मान पुरस्कार मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । यश वर्चश्व बढ्ला । विजयश्री प्राप्त होला । मिठो भोजन मिल्नेछ । प्रेममा रूचि बढ्ला ।
वृष – भागदौडमा वृद्धि हुनेछ । शारीरिक र आर्थिक कार्यमा प्रगति होला । विवाद आदिदेखि सचेत भइ अरुको भर नपरी आफ्नै बल विवेकले काम गर्नु हितकर रहला । खर्चमा नियन्त्रण आउनेछ । व्यापारमा सफलता मिल्नेछ । सुख र भाग्यवर्द्धक काम बन्नेछ । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्नेछ । आशा आँट उत्साह बढ्नेछ । साथीभाइको सहयोग मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ ।
मिथुन – भागदौड व्यस्तता बढ्ला । जोखिममा नपर्नु बेस होला । सोचीविचारी काम गर्नुपर्ला । आशा उत्साह बढ्ला, नयाँ काममा सफलता मिल्नेछ ।
कर्कट – मान पुरस्कार मिल्नेछ । आय वृद्धि होला । कर्मयोगी रहनुहुनेछ । यश वर्चश्वमा वृद्धि हुनेछ । व्यवसायिक पक्षसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । साझेदारीको काम बन्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । आंट उत्साह बढ्ला । प्रयासरत काम बन्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला ।
वृश्चिक – आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्नेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । लेखन–प्रकाशनसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । आफन्तको सहयोग प्राप्त होला । आर्थिक पक्ष बलियो बन्नेछ । साथीभाइको साथ भेट्ला । मिठो भोजन मिल्नेछ ।
धनु – धर्मपथमा सफलता मिल्नेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । मनोकुलको काममा सफलता मिल्नेछ । उच्चाधिकारीको सहयोग मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बढ्ला । शैक्षिक र बौद्धिक काम बन्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग मिल्नेछ । धन मान महत्व बढ्ला ।
मकर – खर्च र लगानी बढ्ला । धोखा हुने ठगिने सम्भावना रहनेछ । सोचीविचारी काम गर्नु अनुकुल रहनेछ । हांसविलासमा आकर्षण रहला । नियमकानूनलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ । ऋण रोग र शत्रुप्रति सचेत रहनुपर्नेछ । भ्रमण पनि गर्नुहुने सम्भावना रहनेछ । बौद्धिक र रचनात्मक कार्य बन्नेछ । सुख सन्तति धन यश इष्टमित्र बढ्ला । ख्याति फैलिनेछ । सुख शान्ति ऐश्वर्य बढ्ला ।
कुम्भ – धन यश मान सुख समृद्धि बढ्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा आकर्षण बढ्नेछ । रसराग गीतसंगीतमा आकर्षण बढ्नेछ । सुख सन्तति बढ्नेछन् । उच्चाधिकारीको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । आरोग्यता वृद्धि होला ।
अघिको समचार बालिका बलात्कार तथा हत्याका घटना कहाँ कहाँ भए ?
अर्को समचार पाठकको पुर्पुरा : वि.सं. २०७७ भाद्र २२ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ७ तारिख) सोमबार : ॐ नम शिवाय